केशव श्रेष्ठ जस्तै कांग्रेस बन्न सके पो !
२०७८ मङ्सिर ६ गते ११:३३:०० मा प्रकाशित
अर्घाखाँचीका केशव श्रेष्ठलाई देशभरका अधिकाँश कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले नचिन्न पनि सक्छन् । अर्घाखाँचीलाई राजनीतिक कर्मथलो बनाएर साढे तीन दशक लामो समय देखि कांग्रेस राजनीति गर्दै आएका श्रेष्ठको राजनीतिक आचरण सिंगो कांग्रेस पार्टीका लागि भने अनुकरणीय हुन् सक्छ ।
खाइलाग्दो ज्यान भएका श्रेष्ठलाई पहिलो पटक देख्नेले लडाकु, जड्या जस्तो देख्न सक्छन् । जब केशव दर्जा अनुसनारका मानिसहरुसँग बोल्न थाल्छन् ,त्यस पछि केशवप्रतिको धारणा एकाएक परिवर्तन् हुन्छ ।
नम्र ,शिष्ट शैलीमा बोल्ने श्रेष्ठ अर्घाखाँचीका कांग्रेस नेता हुन् । ५२ वर्षीय अविवाहित श्रेष्ठ जाँड, रक्सी, चिया, चुरोट र माछामासु खाँदैनन् । सामान्य पहिरनमा देखिने श्रेष्ठ चौबिसै घण्टा कार्यकर्ताको सेवामा दौडिरहेका हुन्छन् । काँग्रेस कार्यकर्ताका मात्रै होइन्,सिंगो जिल्लावासीका दुःख सुखका सजिलो साथी बनेका छन् । अफ्ठयारो परेका मानिसका लागि साथ दिन कुनै समय र राजनीतिक वादले, केशवलाई छेक्दैन ।
आध्यात्मिक प्रवृत्तिका उनी हरेक दिन ५० बढी कुकुरलाई खाना ख्वाउने काम गर्दै आएका छन् । उनको पशु प्रेम पनि अचम्मको देखिन्छ । कुकुरका नाममा उनले खर्च गरेको देख्दा सबै छक्क पर्छन् । उनी भन्छन्- "यी कुकुरको पनि आत्मा छ । पशुलाई प्रेम गर्न नसक्नेले मानिसलाई कसरी प्रेम गर्ला र!"
आर्थिक र नैतिक रुपमा केशवको चरित्रका बारेमा जिल्लामा किम्बदन्ती जस्तो गरी कथा सुन्न सकिन्छ । त्यसो त आर्थिक पारदर्शीताका बारेमा श्रेष्ठले खुलेयाम देवदेवी भाग्दै अन्य नेताहरुलाई चुनौती दिँदै आएका छन् ।
२०४६ को परिवर्तन पछिका केही समय दलहरुले आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई लडाउने भिडाउने काममा प्रयोग गरे । कार्यकर्ता जोगाउनका लागि पनि त्यसबेला आँटी कार्यकर्ताको आवश्यकता निकै थियो । अर्घाखाँचीमा यिनै केशव श्रेष्ठ जिउँदोजाग्दो नभएको भए कांग्रेस कार्यकर्ताले कस्तो दुःख भोग्नु पर्ने थियो , होला । अर्घाचाँचीका पुराना नेता कार्यकर्ताहरुले आज पनि सम्झिरहेका छन् ।
एक समय अर्घाचाँचीमा कम्यूनिस्टहरुले कांग्रेस कार्यकर्ताहरुलाई खोजीखोजी कुट्ने गर्थे । कुटिने कार्यकर्ता जोगाउन दौडिने केशव आज शरीरमा पचास बढी टाँकाको पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन् । संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई लिएर गाउँगाउँ जानका लागि केशव श्रेष्ठ अग्रपंक्तिमा नदेखिने हो, भने कार्यकर्ताहरुको मन काप्ने गथ्र्यो ।
अर्घाखाँचीका सामान्य कार्यकर्ताका लागि रक्षाकवज जस्तै बनेका केशवले जिल्लाका नेताहरु रेवतीप्रसाद भूसाल, डाक्टर रामबहादुर बिसी , पुष्पा भूसाल र मानबहादुर विश्वकर्मा लगायत नेता - कार्यकर्तालाई जोगाउनका लागि दर्जनौँ पटक पिटिनु परेको छ । उनले दर्जनौ पटक मृत्यु स्पर्श गरेका छन् ।
दुई कार्यकाल जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भएका श्रेष्ठ महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै महासमिति सदस्य समेत बने । पार्टीका लागि आफ्नो सम्पूर्ण जीवन समर्पण गरेका श्रेष्ठ काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा अर्धाखाँची जिल्ला सभापतिका प्रत्याशी बनेका छन् ।
"आफ्नै पार्टीका गलत क्रियाकलाप विरुद्ध बोल्नेहरु नै पार्टीका इमान्दार सिपाइ हुन!", जननेता बीपी कोइरालाले भनेको जस्तो पार्टीका विकृति विरुद्ध बोल्न सक्ने र कार्यकर्तामाथि समर्पण हुन सक्ने क्षमता राख्ने व्यक्तिलाई पहिचान गर्ने सही समय कांग्रेसजनका अगाडि आएको छ ।
देशैभरका कांग्रेस कार्यकर्ताले केशव श्रेष्ठहरु खोज्ने र रोज्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यो अवसर खेर फाले भने फेरी पनि कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु दास बन्नुको विकल्प रहने छैन् ।
Suman Basyal लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ७ मंगलबार ८:०३ pm )
जिल्लाले खोजेको नेता केशब श्रेष्ठ हो।निस्ठाको प्रतिमुर्ती हो उहाँ !
Bhanu Acharya लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ४:५० pm )
केशव दाईलाई यो पटक हामी सबैले न्याय गर्ने समय आएको छ। आफ्नो सारा जीवन संगठन मा बिताएको एउटा सन्त,नयाँ जोस जागर भएको सम्पूर्ण युवा देखि बृद्ध वृद्धाहरुको मन मुटुमा बस्न सफल नेतालाई हामीले जिताउन सकिएन भने जिल्लामा कांग्रेस प्रति युवाहरुको आकर्षण अझ मरेर जानेछ।संगठन मजबूत बनाउनको लागि पनि तपाईं आउनै पर्छ। त्यसैले समयलाई चिनौ जिल्लामा congress lai बलियो बनाऊ। केशव दाईलाई विजयको अग्रिम शुभकामना!! जयनेपाल????????
तारा प्रसाद पान्डे लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार ४:३९ pm )
यो पाली प्रतिनिधि हरुले केशब श्रेष्ठ लाई जिताउन भुमिका नखेल्ने हो भने अर्घाखाँचीमा काङ्ग्रेसको बीउ समेत नरहने कुरामा दुइमत नै छैन
चिरञ्जीवी बस्याल लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार १:०१ pm )
केशव श्रेष्ठले अर्घाखाँची जिल्लाको कांग्रेसको नेतृत्व गर्नु पर्छ ।उहाँले जोगाउनु हुन्छ कांग्रेस ।
अर्जुन लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार १२:५९ pm )
यस्ता राम्रा नेतालाई उठन दिदैन्न ।
डा डेभिड बस्याल लेख्नुहुन्छ (२०७८ मङ्सिर ६ सोमबार १२:४२ pm )
Best wishes Keshab jee. अर्घाखाँचीले जन्माएको एउटा निष्ठावान नेता। पार्टी सुदृढीकरण र काङ्ग्रेसलाई नयाँ जीवन दिन तपाईंको जीत आवश्यक छ।